Indlu YaseGeorgia yenkulungwane ye-19 kunye Nendawo Yokugcina Imvelo - I-Airbnb
Indlu YaseGeorgia yenkulungwane ye-19 kunye Nendawo Yokugcina Imvelo
Sikhangele phambili ekukwamkeleni eBallincard House! Buyela umva uze wonwabele ubuhle beflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex yesibini ekwikhaya lethu le-19th Century Georgian. Ukuba uyafuna, siyakuvuyela ukukukhokela kule ndlu size sabelane nawe malunga neminyaka eyi-200 yembali yendawo yethu etyebileyo. Zulazula ngokukhululekileyo kwiihektare zethu eziyi-120 zeegadi, iifama kunye namahlathi, okanye wonwabele ukhenketho olukhokelwayo lwamabala ethu kwaye ufunde ngemizamo yanamhlanje yokutshintsha umhlaba wethu ube yindawo yokukhusela indalo.
Ukungena kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex kungena kwindlu enkulu.
Iflethi inamagumbi okulala amakhulu anebhedi enkulu enamagumbi okuhlambela ayi-suite
Igumbi lokuhlala linomlilo ovuliweyo (iinkuni zokubasa) oza kulayita ngaphambi kokuba ufike ukuba uceliwe. Kukho netafile enokusetyenziswa njengetafile yokutyela okanye idesika. Kukho ibhedi eyisofa elala abantu abayi-2.
Ikhitshi linazo zonke izixhobo zombane nezinto zasekhitshini ezifunekayo ukuze kuphekwe isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa. Iti, ikofu kunye nezinye izinto zokupheka ezisisiseko (ubisi, isonka, ityuwa, ipepile, iziqholo, ioyile yokupheka) ziyafumaneka
KUBALULEKILE: Kumaqela ahlalayo, sifuna ukuqaphela ukuba igumbi lokuhlambela ligumbi lokulala elingaphandle kweflethi okanye indlu ekwicomplex. Zonke iindwendwe kuza kufuneka zigqithe kwigumbi lokulala ukuze zisebenzise igumbi lokuhlambela.
Igumbi lokuhlambela lineshawa (akukho bhafu).
4.98 · Izimvo eziyi-286
UDave noIrene baza kwamkela xa ufika ibe baza kufumaneka ukuze bakuncede ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Iindwendwe zinokonwabela into ezinokuyonwabela yabucala, okanye ukuba ziyafuna, zonwabele uhambo olukhokelwayo lwendlu kunye namabala, zize zijoyine uDave noIrene ukuze zive imbali namabali eBallincard House.
Iindwendwe zinokonwabela into ezinokuyonwabela yabucala, ok…